Akhriso: Qodobadii la isku mari waayay intii uu socday shirkii Ra’iisul Wasaaraha iyo Midowga Musharraxiinta – Kalfadhi
Akhriso: Qodobadii la isku mari waayay intii uu socday shirkii Ra’iisul Wasaaraha iyo Midowga Musharraxiinta
March 5, 2021 March 5, 2021 Hassan Istiila
Shirkii u dhaxeeyay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda Midowga Musharraxiinta, ayaa xalay kusoo dhammaaday natiijo la’aan, kaddib saacado badan oo uu socday kulanka.
Shirka ayaa bilowday 8 habeenimo, isagoona dhammaaday 3 habeenimo. Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo ka qeyb-galay kulanka, ayaa caddeeyay in la isku mari waayay afar qodob oo kala ah:
1- In madaxweynaha uu qoro dikreeto uu ku cadaynayo in masuuliyadaha iyo go’aanada amniga iyo doorashooyinka uu faraha kala baxo.
2- Si loogu kalsoonaado amaanka dalka iyo kan doorashooyinka in ciidanka laga saaro siyaasada, lana bedelo ama ugu yaraan shaqada laga joojiyo taliyayaasha ciidanka ee qaybta ka ahaa weerarkii 19 Febraayo, kuwa cusubna laga saxiixo in ay siyaasada faraha kala baxaan.
3- In la furo masaaxada siyaasada oo aan cidna idan looga qaadan kulamada, dibadbaxyada, abaabulka kale ee ololaha doorashooyinka, warbaahinta qarankana loo sinnaado.
4-In la cadeeyo ka qaybgalka Midowga ee wadahalada doorashooyinka.
Dhinaca kale, Mudane Rooble, ayaa xusay in uu sameeyay tanaasul badan intii shirka uu socday.
“Qodobbadii aan ka hadalnay waan isku raacnay marka laga reebo qodob ay ku adkeysteen oo ah in laga qeyb galiyo shirka Madasha Dowladda Federaalka, Dowlad-goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, taas oo la macne ah in dib loo furfuro heshiiskii 17-kii September,2020, oo aanan kaligey xaq u lahayn wax ka baddelkiisa.”
“Wali Albaabadeydu way u furan yihiin wada hadal iyo is-qancin, si aan xal kama dambeys ah u gaarno dalkana uga hirgalinno doorasho hufan oo si nabad ah ku dhacda.”, ayuu raaciyay hadalkiisa Mudane Rooble.
Ra’iisul Wasaare Rooble oo ka hadlay shirkii ku soo dhammaaday natiija la’aanta ee uu la qaatay Musharraxiinta
Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo tacsi u diray Xildhibaan Cali Dhahar oo hooyadii ku geeriyootay Gobolka Sanaag
Ra’iisul Wasaare Rooble oo safiirka Mareykanka u sheegay in ay ka go’an tahay hir-gelinta doorasho daah-furani
Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo Danjiraha dalka Mareykanka Yamamoto oo kulan ku yeeshay Muqdishu, ayaa...